Afganistaan: Taliban oo Maraykanka ugu baaqaysa wada-hadal toos ah – Kasmo Newspaper
Afganistaan: Taliban oo Maraykanka ugu baaqaysa wada-hadal toos ah
Updated - February 27, 2018 2:07 pm GMT
London (Kasmo), Talibaan ayaa Isniintii 26kii Febraayo soo saartay qoraal ay ku caddeynayso in Maraykanku aqbalo codsiga xal nabadeed oo dadweynaha Afganistan ku doonayaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda.
Mintidiintu waxay Dokumentiga ku caddeeyeen in ay diyaar u yihiin wada-xaajoodka, iyaga oo saraakiisha Maraykanka u soo jeedinaya in ay si toos ah ulgala xiriiraan Xafiiskooda ‘Political Office of Islamic Emirate’ ee Qadar.
‘Xaaladda ayay ka caawiyi lahayd, haddii Maraykanku aqbali lahaa codsiga xaqa ah ee Shacabka Afganistan, lagalana xaajoon lahaa, iyada oo loo marayo khadad nabadgalyo ah’. Sidaas ayaa lagu qoray warqadda, iyada oo lagu daray in ‘dagaalku aanu ahayn doorasho Taliban u xilatay, laakiin dibadda looga soo dabaabulay’.
Idaacadda ‘Tolo News’ ee Talibanka ayaa laga sheegay in warkaan la soo saaray ka dib markii Xukuumadda Kabul bilowday in ay mas’uuliinta Qadar kala hadasho xiritaanka Xafiiskii Taliban ku lahaa Dooxa.
L-taliyaha Madaxweynaha Afganistan dhinaca nabadgalyada, Maxamed Xanif Atmar, ayaa caddeeyay in shaqadii Xafiiskaasi ahayd socodsiinta wada xaajoodka, laakiin ilaa maanta aan 1 tillaabo loo qaadin dhinacaas.
Ma ahan markii u horreysay oo Taliban ku boorriso Maraykanka wada xaajood, bartamihii Febraayo waxay caddeeyeen in ay doonayaan sidii colaadda loo soo afjari lahaa iyada oo Maraykanka lala xaajoonayo.
Ka dib markii talada laga tuuray 2001 iyo galitaankii NATO 2003, Taliban waxay isu rogeen Urur kacdoon oo fuliyay weerarro badan, dalkana xasilloonidarro ka dhaliyay, si ay ula wareegaan talada. 16 sano oo colaad ah iyo kharajka in ka badan $ 100 Bilyan oo Dollar ma noqon wax xasiliya dalkaas oo wali ay ka dhacayso dhibaatada mintidiinta maxalliga ah iyo kuwa gacansaarka la leh Daacish.
Weerarradii u dambeeyay, xiriirkana ahaa ee Talibaan sheegato waxay 23-24kii Febraayo ka dhaceen meelo kala duwan oo Afganistaan ah, sida Gobolka Farah, Kabul Helman, waxaana guud ahaan ku waxyeelloobay 20 qofood.